Fifidianana · Jona, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Fifidianana · Jona, 2018
Tantara mikasika ny Fifidianana tamin'ny Jona, 2018
Ozbekistana: Kajikajy tamin'ny fifidianana parlemantera
Azia Afovoany sy Kaokazy 21 Jona 2018
Araka ny efa nampoizin'ireo manam-pahaizana samihafa, nankasitrahana ny fifidianana solombavambahoaka tany Ozbekistana. Namoaka izany vaovao izany ny filohan'ny Vaomiera Misahana ny Fifidianana, Mirza-Ulugbek Abdusalomov ny harivan'io andro io ihany (27 desambra),
Azia Atsimo 20 Jona 2018
Iray volana mahery taorian'ny fametraham-pialan'ny praiminisitra Madhav Kumar Nepal, mbola tsy manana mpitarika ny Repoblika Demaokratika Federalin'i Nepal. Tsy nahavita nanome mpandresy mazava ny fifidianana in'efatra, misy ny fifidianana faha-dimy ho atao amin'ny 18 aogositra.
Ireo Feo Avy Any Azia Atsimo
Azia Atsimo 19 Jona 2018
Famintinana fohifohy mikasika ireo zava-nitranga tao Azia Atsimo (2006).
Amerika Avaratra 16 Jona 2018
Ora vitsy taorian'ny fandresen'i Obama tamin'ny fifidianana ho filoham-pirenena Amerikana, nanao ny lahateniny (amin'ny teny Anglisy) voalohany ilay filoha Rosiana, Dmitry Medvedev, teo anoloan'ny Filankevitry ny Federasiona Rosiana. Nahasarika ny sain'ny firenena sy ny an'ny Tandrefana ny fanambaràny.
Afrika Mainty 16 Jona 2018
Azia Atsimo 15 Jona 2018
Ao anatin'ny natiorako tena tia manao soa ny mpiarabelona, tapaka ny hevitro hizara aminareo tsiambaratelo iray mampivarahontsana, nafenin'ny mpibaiko ambony an'ny Cyber Templar nandritra ny taona maro